बसन्त चौधरीलाई हृदयघात, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
बसन्त चौधरीलाई हृदयघात, के छ अबस्था ?
काठमाडौं ।उद्योगपति तथा कवि वसन्त चौधरीलाई ह्रदयघात भएको छ ।पारिवारिक घुमफिरका लागि हाल दुबईमा रहेका चौधरीलाई अकस्मात ह्रदयघात भएको हो । शुक्रबार हृदयघात भएपछि उनलाई दुबईस्थित अमेरिकन अस्पातालमा भर्ना गरिएको छ ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार चिकित्सकहरुले ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
इतिहास रच्दै बसन्त चौधरी : नेपाली काव्य–साहित्यमा संभवत पहिलोपटक एउटै सर्जकको ९ वटा भाषामा लेखिएको कृतिको एकैपटक लोकार्पण हुने भएको छ ।